La Cabane du Résinier phakathi kwechibi nolwandle - I-Airbnb
La Cabane du Résinier phakathi kwechibi nolwandle
Indawo yam yokuhlala ikufuphi nolwandle kunye nemisebenzi efanelekileyo kwiintsapho. Uyakuxabisa indawo yam yokuhlala ngokuphakama kweesilingi kunye nendawo. Indawo yam yokuhlala ilungele izibini, abahambi bebodwa kunye neentsapho (kunye nabantwana).
Indlwana enomtsalane yokwenyani yeLandes, eqhelekileyo, emoyeni wendlu yomthi we-resin. Indawo yokuhlala eyi-50m² ibekwe kumbindi we-airial ye-oki, ene-oveni yesonka, i-henhouse ehleliyo kunye nendlu yabanini beLandes.
La Cabane du Résinier iqulathe 1 lokulala nge-1 esililini kabini, 1 lokuhlambela kunye Walk-in ishawa kunye WC, kwigumbi lokuhlala 1 2 iibhedi 90 ezahlukeneyo, USB TV, WiFi, 1 yaxhobisa ngokupheleleyo ikhitshi: oveni yombane kunye microwave, njengesicocisi, ukuhlamba umatshini, ifriji-isikhenkcezisi, itoaster, unomathotholo weMP3.
Iiterras ezigqunywe ngefenitshala yegadi, ikona yokufunda kunye nebarbecue.
Embindini weBourg de Saint Girons kwaye kufutshane neevenkile. Indawo yokubhaka, icuba / iofisi yokushicilela, indawo yokutyela, iposi kunye neofisi yabakhenkethi kumgama wokuhamba.
Siya kukuvuyela ukukwazisa malunga nezinto onokuthi uzenze kwindawo ezingqongileyo kunye nosapho okanye abahlobo kwaye sabelane nawe ngeedilesi zethu ezilungileyo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Vielle-Saint-Girons